Shiinaha Galvanized soo saareyaasha xaashiyaha iyo alaableyda | Xingbei
Caqabada Acoustic ee wadada weyn waxaa badanaa loo isticmaalaa yareynta buuqa wadada, wadada weyn, viaduct iyo meelaha kale ee qeylada. Waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah caqabadda la dhigay cidhifka wadada ama wadada tareenka si loo yareeyo saameynta buuqyada gawaarida ay ku yeeshaan dadka degan agagaarka. Xarun nooc ah ayaa laga dhex aasaasay ilaha codka iyo dadka qaata si loogu oggolaado in qalabka wax lagu duubo uu leeyahay hoos u dhac dheeraad ah oo la yaab leh. sidaas awgeed waxay yareynaysaa saameynta xun ee buuq ku leeyahay aagagga ay ku sugan yihiin dadka qaata; xarunta noocan oo kale ah waa Caqabad Acoustic For Highway.
Magaca alaabta Xayndaabka codka
Midab Caddaan; buluug; cagaar; cawl iwm
Guddi caqabad buuq ah 2000x500x80, ama sida aad ugu baahan tahay
Waxyaabaha Xaashida Aluminium; sheet galvanized
Xaashida hufan Xaashida PC / PMMA
Nooca boostada H boostada
Codsiga Xakamaynta buuqa taraafikada
Tusmada dhawaaqa aan dhawaaqa lahayn > 30db
Dhameyso Powder dahaarka leh
Caqabadaha sawaxanka ayaa inta badan loo adeegsadaa dahaarka dhawaqa iyo yareynta buuqa ee gaadiidka iyo tas-hiilaadka dowladda hoose sida waddooyinka waaweyn, jidadka isku-dhafan oo sarreeya, tareennada tareenka fudud ee magaalooyinka, iwm. dahaadhka codka iyo yaraynta buuqa ee warshadaha iyo meelaha kale ee buuqa laga soo saaro.
Waxay leedahay muuqaal qurux badan, soosaar aad u fiican, iyo gaadiid ku haboon iyo rakibid. Qiimo jaban iyo nolol adeeg dheer, waa tan ugufiican magaalo casri ah.
System Nidaamka carqaladda buuqa oo aad u nuugaya
Installation Qalab rakibid ah ama beddelaad dayactir
Be Waa lagu dari karaa agab kale
Si fudud ayaa loo dejin karaa
Repair Dayactirka ugu yar wuxuu u baahan yahay kaliya albaabbada waxyeelloobey in la beddelo
Ku habboon nidaamyada boostada ee taageerada caadiga ah
Sizes Heerarka caadiga / qaababka qaabaysan
♦ Soo-saaristu waa mid iswaafaqsan
Sizes Cabbirka iyo qaababka guddi-khaas ah
♦ Xulashada midabada
♦ Qaloocsan oo qaabaysan ama midab leh
Graphics Sawirada horay loo daabacay
♦ Isticmaalka fiilooyinka amniga ee buundooyinka iyo dhaadhaca waxay ku jiraan khatar hoose
♦ Dabka u adkeysanaya
Intenance Dayactir la'aan
Costs Qiimaha wareegga nolosha oo hooseeya
Coating Warshad lagu mariyay daaha anti-graffiti
Waxaan la shaqeynay khibrad soo gudbinta maraakiibta sanado badan, iyagaa diyaarinaya rarka. Dhib malahan xawaaraha, hawada ama badda, waxaan la socon doonnaa habka alaabtu socoto oo dhan, si loo hubiyo in badeecadaha ay kuu yimaadaan waqtigii loogu talagalay iyo xaalad wanaagsan.
Hebei Xingbei Birta silig mesh Products Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa Anping, Hebei, Shiinaha, oo ah shirkada Warshadaha & Ganacsiga Combo. Shirkaddayadu waxaa la aasaasay 2007 waxayna leedahay tiknoolajiyad casri ah iyo qalab, maareyn cilmiyaysan, iyo nidaam xakameyn tayo leh oo adag, waxaanan helnay shahaadada ISO 9001: 2015. Xingbei waxay khibrad buuxda u leedahay soo saarista iyo iibinta birta birta, caqabadaha dhawaaqa, shabaagta gabion, shabagyada ilaalinta jiirada, miirayaasha iyo shabaqyada deedka.
Our warshad la fikradda maaraynta sare, habka sayniska iyo habaysan, habka maaraynta dabacsan, hal-abuurnimo farsamo oo joogto ah, ku dadaal inaad siiso ciyaar buuxda faa'iidooyinka warshadaha, waxay diyaar u tahay inay xiriir ganacsi oo wanaagsan la yeelato macaamiisha cusub iyo kuwii hore, qiimaha ugu tartanka iyo waqtiga dhalmada ugu dhaqsaha badan, oo waxaan kuugu adeegi doonaa si kal iyo laab ah.
Shirkaddu waxay soo bandhigaysaa nidaamka naqshadeynta noocyada CAD-ga ee horumarsan, waxay qaadataa habka maaraynta wax soo saarka caalamiga ah, iyo alaabteeda iyo adeegyadeeda waxay la kulmaan heerka shahaadada caalamiga ah ee ISO9001, waxayna si fiican ugu iibisaa suuqa caalamiga ah, kaasoo ay si wanaagsan u heleen dadka isticmaala.
1.Waa maxay faa iidadaadu?
J: Ganacsi daacad ah oo leh qiime tartan iyo adeeg xirfadeed oo ku saabsan habka dhoofinta.
2. Sideen kuu aaminsanahay?
J: Waxaan u tixgelineynaa daacadnimo sida nolosha shirkadeena, waxaan kuu sheegi karnaa macluumaadka xiriirka qaar ka mid ah macaamiishayada kale si aad u hubiso deyntayada. Ka sokow, waxaa jira dammaanad ganacsi oo ka timaadda Alibaba, amarkaaga iyo lacagtaadu si wanaagsan ayaa loo dammaanad qaadi doonaa.
3. Sideen ku ogaan karaa sida amarkayga loo fulinayo?
J: Waan baari doonnaa oo waan tijaabin doonnaa dhammaan walxaha si looga fogaado waxyeelo iyo qaybo ka maqan ka hor inta aan la rarin. Sawirada kormeerka faahfaahsan ee amarka ayaa laguu soo diri doonaa si aad u xaqiijiso ka hor intaadan keenin.
4.Ma siin kartaa dammaanad alaabtaada?
J: Haa, waxaan kordhinaa 100% dammaanad qanacsanaanta dhamaan walxaha. Fadlan xor u noqo jawaab celinta isla markiiba haddii aadan ku qanacsanayn tayada ama adeeggayaga.
5.Xagee joogtaa Maku soo booqan karaa
J: Hubaal, ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddeena wakhti kasta.
6.How ku saabsan waqtiga dhalmada?
J: 15-35 maalmood gudahood kadib markaan kuu xaqiijinno shuruudahaaga.
7.maxay tahay nooca lacag bixinta ee shirkadaadu taageerto?
J: T / T, 100% L / C marka la arko, Lacag caddaan ah, Western Union dhammaantood waa la oggol yahay haddii aad lacag kale bixiso, fadlan ila soo xiriir.
Hore: Xaashida Aluminium
Xiga: 2019 New Style China FDA Bamboo Goynta Board Bamboo Gopping Board leh 4 PCS